Macallinkii hore ee Liverpool oo geeriyooday… (Magaciisa iyo sababta geeridiisa) – Gool FM
(Liverpool) 17 Maaajo 2020. Waxaa dalka Faransiiska ku geeriyooday maanta macallinkii hore ee kooxda Liverpool, Jacques Crevoisier, isagoo ku geeriyooday da’da 72 sano.
Crevoisier ayaa sababsaday wadno xanuun ku soo booday sida lagu helayo wararka ka imaanaya dalka Faransiiska.
Macallinka geeriyooday ayaa ka mid ahaa shaqaalaha tababarka kooxda Liverpool muddo labo sano ah xilligii uu kooxda ka talinayay Gerard Houllier.
Crevoisier ayaa Reds macallin u noqday xagaagii 2001 isagoo shaqada ka baddelay Patrice Bergues kaasoo xilka agaasimaha guud ka qabtay kooxda Faransiiska ka dhisan ee Lens.
Shaqooyin kala duwan ayaa sidoo kale lagu xasuustaa intii uu ku jiray kubadda cagta, waxaana ka mid ah inuu ka shaqeeyay qaybta farsamada xiriirrada kubadda cagta ee France iyo UEFA.
Sidoo kale waxa uu hoggaamiye u noqday xulka qaranka Faransiiska ee ciyaartoyda da’dooda ka hooseyso 19-jirrada.
Intii uu hayay taliska kooxda Liverpool, waxay Reds gaartay rubac-dhammaadka tartanka Champions League iyagoo Premier League ku dhammeystay booska labaad xilli ciyaareedkii 2001/02, balse waxa uu xilli ciyaareedkii xigay ku hoggaamiyay ku guuleysiga League Cup oo ay Manchester United kaga qaadeen 2-0 ciyaartii Fiinaalka ee ka dhacday magaalada Cardiff.
Crevoisier ayaa sababo dhanka qoyskiisa ah uga tagay shaqada kooxda Anfield xagaagii 2003, balse waxa uu ahaa taageere weyn oo Liverpool u sacab tuma, isagoo sii waday xirfaddiisa kubadda cagta isagoo caawiye ka noqday Arsenal, iyo shaqadiisa saxaafadda ee uu kaga shaqeynayay dalka Faransiiska.